I-RTK isonga isigayo iRokytnice nad Jizerou Lysá hora
RTK, spol. s ro eRokytnice nad Jizerou, yinkampani eqhubeka nesiko elide lokukhiqiza izindwangu eRokytnice nad Jizerou. Izisekelo zenkampani zingabhalwa emuva ku-1867. Bekulokhu kukhiqizwa ikakhulukazi izindwangu zikotini, ethafeni nejacquard, grey futhi enombala, okwesikhashana lapho inkampani nayo ibinombala wayo, ngakho-ke yaguqula indwangu uqobo ifomu lokugcina lokuthengisa.
IRokytnice nad Jizerou isenyakatho neBohemia engxenyeni esentshonalanga yezintaba zaseGiant. Umlando waso wakhona uxubaniswa nomkhakha wezindwangu, owawuyimbangela eyedlule yomholo wedolobha kanye nokuziphilisa ngalo. Njengamanje, ngokuyinhloko siyindawo yokuzijabulisa, yezivakashi kanye nezemidlalo. Ehlobo kuyindawo ekahle yokuqalwa izintaba futhi ebusika iyisikhungo esibalulekile sokwehla nokwenyuka kwezwe.
engenhla Rokytnice Lysa hora podzim Rokytnice RTK yendwangu factory Ukugaya imishini
Amathegi: engenhla Rokytnice Lysa hora podzim Rokytnice RTK yendwangu factory Ukugaya imishini
Indawo: Horní Rokytnice, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, Česko